निर्मला पन्तको छैन आत्तोपत्तो ! भागरथीको बल,त्कार पछी ह,त्या भएको घ,टना सेलाउन नपाउदै अर्को बला,त्कारपछि किशोरी बेहोस -
निर्मला पन्तको छैन आत्तोपत्तो ! भागरथीको बल,त्कार पछी ह,त्या भएको घ,टना सेलाउन नपाउदै अर्को बला,त्कारपछि किशोरी बेहोस
२७ माघ काठमाडौं-नसालु पदार्थ खु,वाएर बला,त्कार गरिएका कारण बेहोस अवस्थामा बाटोमा भेटिएकी युवतीको कोसी अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। १७ वर्षीया ती किशोरीलाई शुक्रबार बेलुकी कोसीमा भर्ना गरिएको हो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि म,दिरासँगै नसा,लु पदार्थ खुवाएर लठ्या,उँदै बला,त्कार गरिएका कारण किशोरीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको जानकारी प्रहरीलाई दिएका छन्। बला,त्कारका कारण लागेको चोटसँगै किशोरीको अत्यधिक रक्त,स्राव भएको पाइएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्।
गम्भीर अवस्थामा रहेकी किशोरी आइतबारबाट केही होसमा आएकी छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘सुरुमा किशोरीको अवस्था निक्कै गम्भीर थियो,’ उपचारमा संलग्न एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘बला,त्कारका कारण योनिमा चोट लाग्नुका साथै धेरै रक्तस्राव पनि भएको थियो।’ तर सुरुमा अत्यधिक रक्त,स्राव भइरहेका बेला ल्याइएकी किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले भने सामान्य बन्दै गएको उनको भनाइ छ। घटना गत बिहीबार रातिको हो। नसालु पदार्थ खुवाएर मोरङ कानेपोखरी–२ का २९ वर्षीय प्रेम चौधरीले १७ वर्षीया किशोरीमाथि बला,त्कार गरेको घट,ना बाहिरिए पनि प्रहरीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले काम गरेको स्थानीयको गुनासो छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा लिखिएको छ ।
सुरुमा घटनामा संलग्नलाई प,क्राउ गर्न नै चासो नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रहरी अधिकारीले पनि यस घट,नालाई लुकाउने प्रयास गरेका छन्। अहिलेसम्म प्रहरीले यो घ,टना सार्वजनिक गरेको छैन। चौधरीले दुई साताअघि चिनजान भएकी ती किशोरीलाई सल्लाह गर्नुछ भन्दै ललाइफकाई आफ्नै घरमा बोलाएर रातभर राखी बला,त्कार गरेको खुलेको प्रहरी स्रोतले बतायो। चौधरी कानेपोखरीमा किराना पसल सञ्चालन गरेर बस्छन्। घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार भोलिपल्ट शुक्रबार बिहान केही होसमा आएपछि किशोरीलाई चौधरीले घर पठाएका थिए। तर युवती चौधरीकै घर नजिकको बाटोमा बे,होस अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले उद्धार गर्दै उपचारका लागि अस्पताल लगेपछि बला,त्कारको घट,ना बाहिरिएको हो।
बला,त्कारमा संलग्नलाई कार,बाहीको माग राखेर पीडि,तका आफन्तले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले घट,नामा संलग्न चौधरीलाई पक्रा,उ गरेर आइतबार उनलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कोसी अस्पताल ल्याएको थियो। जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले बला,त्कारमा संलग्नलाई संरक्षण गर्दै पक्रा,उ गर्न आलटाल गरेको र अहिले प,क्राउ गरेपछि पनि घट,नालाई अन्यत्रै मोड्ने प्रयास गरेको गुनासो आफन्तको छ। प्रहरीले सुरुमै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको एक आफन्तले बताए।
प्रहरीले दुवै जनाको सहमतिमा यौ,न सम्पर्क भएकाले घटनालाई बलात्कार भन्न नमिल्ने बताएर अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेको गुनासो आफन्तको छ। कानुनले नै उमेर नपुगी सहमतिमै भएको यौन सम्पर्कलाई बला,त्कार मानेको छ। प्रहरीले घट,नालाई लिएर पीडित पक्षलाई मिल्न दबाबसमेत दिने गरेको स्थानीयले बताए। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि बला,त्कार भएको भनिरहँदा प्रहरीले घट,नालाई सामान्य रूपमा लिएर पीडकको संरक्षणमा लागेको उनको आ,रोप छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रहरी निरीक्षक अनिल पौडेलका भनाइले पनि प्रहरीले घट,नालाई सामान्य रूपमा लिएको पुष्टि हुन्छ। उनले घटनाको प्रकृति र पी,डकको विवरणसमेत खुलाउन मानेनन्। ‘यस्ता घट,ना धेरै भएका छन्। यो सामान्य घ,टना हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पीडितले केही नभनेका कारण बला,त्कार हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। पी,डित भनिएकी युवती केटाको घरमा आफैं गएको पाइएकाले घट,नालाई यकिन गर्न सकिरहेको छैन।’
Previous बला,त्कारपछि घाँटी थिचेर ह,त्या भएको खुलासा
Next रामकुमारी झाँक्री यसकारण रिहा